Fitaovana Pallet - Delta Engineering Belzika
Archive from sokajy "Pallet Handling"
Alakamisy 13 martsa 2014 by Delta Engineering
Ity duplatoran'ny pallet ity dia mamela ny mpandraharaha iray hanao pallet ambony iray (3100 mm), amin'ny alàlan'ny fametrahana paosy roa amin'ny antsasaky ny haavony. Fampihenana ny vidin'ny fitaterana 5 ka hatramin'ny 15%!
Published in Fitaovana Pallet
Notsongaina ambany: paleta
Ity dispenser amin'ny pallet ity dia manisy palety tsy misy fotaka amin'ny conveyeur roller. Mampihena ny fotoana fanelanelanana an'ny mpandraharaha ary hialana amin'ny kamiao palitao amin'ny famokarana.
Azo ampidirina ao amin'ny milina fonosana Delta hahazoana kofehy mandeha ho azy.
Ny fiara famindrana Pallet
Ity pallet famindrana fiara amin'ny famindrana fiara pallet amin'ny halavirana lavitra kokoa tsy manakana ny fidirana amin'ny milina hafa. Misintona ireo palety avy amin'ireo palletizer izy ireo ary entiny any amina conveyor iray miainga.
Roller pallet mampita
Pallet roller conveyors misy amin'ny sakany samihafa: 1240 mm ary 1560 mm. Mitafosafo ny paletety amin'ny lafiny rehetra ary miteraka buffer!
Notsongaina ambany: fikaonan-dàlana, buffering, paleta
Ity fisondrotan'ny paleta ity dia mandresy ny fahasamihafana eo amin'ny avo sy ny masinina. Mamelona pallets ao / mivoaka na mankany amin'ny conveyor roller, mampiakatra paleta ho amin'ny ambaratonga avo kokoa (masinina) na mametraka azy ireo amin'ny tany.